निजी विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई विज्ञको सुझाव – purnakhabar.com
काठमाडौं ९ पुस। सरकारले गठन गरेको विज्ञ टोलीले संविधानले विद्यालय शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरेकाले अब निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यतिमात्रै होइन विद्यार्थीहरुलाई चिट चोर्न पनि सिकाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
शिक्षाविदले सबै तहका विद्यार्थीलाई किताब हेरेरै परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको नागरिकमा समाचार छ । शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला संयोजक रहेको १५ सदस्यीय शिवाविदको विज्ञ टोलीले तयार पारेको सुझाव मस्यौदामा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
तर, विज्ञ टोलीका सदस्यसचिव समेत रहेका शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले भने यो उच्च शिक्षा अध्ययनमा ओपन र प्रयोगात्मक किसिमको परीक्षा लक्षित सुझाव भएको बताउँछन् ।